Ihe ndi ozo gbasara Geographic Information Systems n'iji CadCorp SIG
CadCorp GIS Ndenye Nduzi
Tupu anyị ekwuo banyere CadCorp, ngwanrọ maka GIS iji ụfọdụ ezigbo ikike CAD. Site na ebe a ị nwere ike ibudata ndu ọsọ ọsọ maka Cadcorp, na Spanish. Nke a bụ ọdịnaya nke ndu: 1 Introduction 2 Installation 3 File formats 4 Na-adọnye ozi mpụga 5 Ngosipụta nke interface 6 Na-arụ ọrụ na windo map ...
Ihe mmepe Development CadCorp
Na post gara aga anyị kwuru maka ngwaọrụ desktọọpụ CadCorp, n'ụdị yiri ESRI. N'okwu a, anyị ga-ekwu maka ndọtị ma ọ bụ mgbakwunye ndị ọzọ maka mmepe ma ọ bụ mmụba nke ike. Agbanye na n'echiche a, nyocha nke ngwaọrụ ndị a anaghị adị mfe ịkọwa nha anya na ArcGIS Engine na ...
Nkọwa n'etiti sava map (IMS)
Tupu anyị ekwuo banyere ntụnyere na usoro ọnụahịa, nke nyiwe sava map dị iche iche, oge a ka anyị ga-ekwu maka ntụnyere na arụmọrụ. Maka nke a anyị ga-eji dị ka ihe ndabere ihe ọmụmụ Pau Serra del Pozo, site na Nka na ụzụ nke Cartography na Mpaghara GIS (Diputación de Barcelona) na ọ bụ ezie na nyocha ahụ dabeere ...
Na mbụ anyị atụnyere ụgwọ ikike ikike na nyiwe GIS, ma ọ dịkarịa ala ndị na-akwado sQLServer 2008. Nke a bụ nyocha nke Petz mere, otu ụbọchị ọ ga-eme mkpebi iji mejuputa ọrụ maapụ (IMS). Maka nke a, ọ tụnyere mgbe ọ na-efu iwekota ndị ọrụ abụọ n'ọkwa ọkwa, iji kwadebe ...